Carvajal Oo Beeniyey In Uu Qaniinay Mandzukic
HomeChampions LeagueCarvajal Oo Beeniyey In Uu Qaniinay Mandzukic
15/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Difaaca baasha midig ee Real Madrid ee Dani Carvajal ayaa beeniyey eedaymo loo jeediyey oo ahaa in uu qaniinay weeraryahanka Atletico Madrid ee Mario Mandzukic intii ay socotay ciyaartii xalay ku dhex martay garoonka Vicente Calderon.
Dani Carvajal ayaa ku qoray bartiisa Twitter-ka in uu warbaahinta ku arkay eedaymo loo jeedinayo, laakiin aanay waxaas waxba ka jirin.
“Markii ay ciyaartu dhamaatay ayaan arkay iyadoo laygu eedaynayo in aan qaniinay ciyaartoy iga soo horjeeda. Waxaan caddaynayaa in aanan cidna qaniinin, iskuna deyin in aan sidaa sameeyo.” Sidaas ayuu yidhi Carvajal.
Difaacyahankani waxa kale oo uu ka hadlay go’aamadii uu qaatay garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinayey, kaas oo uu sheegay in inkasta oo uu cadaadis badani saarnaa haddana uuu si fiican u shaqeeyey.
Dani waxa uu u jawaabay difaacyahanka Atletico Madrid ee Suarez oo garsooraha ku sheegay nin aad u xun, waxaanu yidhi Carvajal oo u jawaabaya ciyaartoygaas: “Waa fikirkiisa oo kaliya. Waxa uu sameeyey go’aamo sax ah laakiin qolada kale ay khalad u aragto. Kaadhkii la siiyey Marcelo muu ahayn in la siiyo, iyadoo waliba uu maqnaan doono kulanka dambe.” Sidaas ayuu yidhi.
Dani Carvajal waxa uu sheegay in aanay jirin koox loo saadaalinayo in ay u gudbi doonaan wareegga afar dhamaadka, laakiin ay koox waliba halgan ugu jirto in ay u gudubto iyadoo ay Real Madrid fursad u tahay in ay ku ciyaari doonto garoonkeeda oo ay taageereyaasheedu buux-dhaafin doonaan.
Man United 0-0 Inter Milan (5-3 Rigodhayaal): Guulihii Van Gaal Oo Weli Sii Socda… Vidic Oo Markii Ugu Horeysay La Ciyaaray Kooxdiisii Hore
Manchester City 0-1 Stoke: Kooxda Horyaalka Difaacanaysa ee Pellegrini oo Mucjiso kala kulmay Stoke